पाएको त्यो स्कूल – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
बाह्र बजेको खरो घाम, चुइँकिने साइकलमा चढेका छन् दुईजना । उत्तरतिर हाकिँदा छन् । बाटाभरी विद्यार्थीहरू भेटिन्छन् । एक किसिमको गुञ्जायमान वातावरण फेला पर्छ–बाई, बाई ! सर….बाई…!! आफूले पनि नफर्काएमा पाखे भइएला भन्ने त्रास छ, साइकल यात्रीहरूमा । उनीहरूका पनि ओठ खुल्छन्– बाई–बाई स्टुडन्टस्…बाई…!
साइकलको पछिल्तिर पातर सर बस्थे । फेरि साइकल चुँइकिन थाल्थ्यो । बाटाभरी फेरि विद्यार्थीहरूकै लावालस्कर भेटिन्थ्यो । ‘गुड मर्निङ्ग सर… !,’ ‘गुड मर्निङ्ग सर…!!,’ स्वर गुञ्जिरहन्थ्यो । हरेक विद्यार्थीलाई अभिवादन फर्काउनु सम्भवै थिएन । केही विद्यार्थीहरूलाई भने ‘गुड मर्निङ्ग स्टुडन्टस्…!, गुड मर्निङ्ग …!!’ भन्दिन्थे । केहीलाई भने टाउको हल्लाएरै अभिवादन स्वीकार गरेको जनाऊ दिन्थे ।